Fiaran-dalamby elektrika - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Mpanamboatra herinaratra avo lenta sy thyristor amin'ny lamasinina elektrika
Fiaran-dalamby elektrika: toy ny lamasinina elektrika dingana-DC tokana, io no lamasinina herinaratra AC be mpampiasa indrindra. Ao amin'ny lamasinina elektrika mpanitsy, ny AC misy voltaka avo lenta amin'ny tambajotram-pifandraisana dia nesorin'ny transformer traction tamin'ny voalohany, ary avy eo ny AC dingana iray dia navadika ho DC tamin'ny alàlan'ny fitaovana fanitsiana izay misy singa mpanitsy silikika na thyristor , ary natolotra ho an'ny motera mihetsika. Ataovy ny fifehezana ny dingana amin'ny rectifier mba hanovana ny volt averina ho fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny fiaran-dalamby.
Fiaran-dalamby maotera mandeha mandeha irery: fantatra amin'ny anarana hoe fiaran-dalamby elektrika AC mivantana, motera fampandehanana commutator mandeha irery no ampiharina. Ny herin'ny herinaratra AC avo lenta amin'ny tambajotram-pifandraisana dia hampihena ny voltage amin'ny alàlan'ny mpanova, avy eo atolotra ny motera traction mivantana.
Fiaran-dalamby AC-DC-AC: fantatra ihany koa amin'ny lamasinina elektrika dingana-tokana-dingana telo. Ny herin'ny AC misy herinaratra avo lenta amin'ny tambajotram-pifandraisana dia nidina voalohany ary nanitsy azy tamin'ny alàlan'ny fanovana traction, toy ny fitazonana ny herinaratra DC na DC ankehitriny an'ny rohy DC antonony dia milamina. Avy eo, ny boriborintany dia manova ny herin'ny DC antonony ho herin'ny AC dingana telo ary manome izany ho an'ny motera fampandehanana asynchronous dingana telo na ilay maotera fampandrenesana dingana telo. Ny herin'ny output sy ny hafainganam-pandehan'ny fiaran-dalamby dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny matetika sy ny herin'ny fe-potoana telo mifandimby ataon'ny fitaovana inverter.
Fitaovana fanitsiana ao anaty fisintomana: avadiho ny angovo elektrika nafindra avy amin'ny tsipika fandefasana herinaratra ho amin'ny herin'ny herinaratra, dingana iray mandeha matetika ary herinaratra AC dingana telo andiany herinaratra ary zaraina amin'ny tamba-jotra mifandray.
Ny fehezan-dalàna mifehy ny thyristor